Vinaingitra cider an'ny Apple ho an'ny fihenan-danja sy fanafody hafa mety miasa - Wellness | Desambra 2021
Orinasa Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa, Vaovao Lalao Orinasa, The Checkout News Community, Company Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fialam-Boly Mpanao Gazety Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao
Tena >> Wellness >> Afaka manampy amin'ny fihenan-danja ve ny vinaingitra paoma?
Ny vinaingitra cider Apple (ACV) dia iray amin'ireo akora ilaina be indrindra ao an-dakozia. Ny vinaingitra cider dia mampiasa hatramin'ny lamba salady na lasopy, ary koa famonoana otrikaretina voajanahary. Fa amin'izao andro izao, ny fihenan-danja manodidina ny vinaingitra paoma dia ny fihenan'ny lanja. Ny sakafon'ny vinaingitra paoma dia milaza fa manana tombony ara-pahasalamana manomboka amin'ny fihenan'ny lanjany hatramin'ny fihazonana ny fatran'ny siramamy ao anaty ho an'ny olona voan'ny diabeta. Fa ny misotro vinaingitra avy amin'ny paoma dia tena manampy anao handoro tavy, sa misy fomba hafa azo soloina? Andao handavaka.
Inona ny vinaingitra paoma?
Ny vinaingitra cider Apple dia marina amin'ny anarany. Ny ranon'ny paoma torotoro, fantatra ihany koa amin'ny hoe cider poma, dia masirasira amin'ny alàlan'ny fampidirana masirasira, mamadika ny siramamy an'ny cider ho asidra acetic, izay manome io hanitra vinaingitra miavaka io. Mety hitanao miresaka momba ilay reny amin'ny tavoahangy vinaingitra paoma. Ity probiotika ity dia ny tsiranoka misy fotony na mijery koba amin'ny ACV izay miforona mandritra ny fizotran'ny fermentation. Ny sasany mino fa ny reny dia tompon'andraikitra amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana vinaingitra paoma, saingy tsy voaporofo izany.
Raha manjaka lehibe amin'ny paoma ACV ny paoma, ny karazam-boaloboka hafa dia manana akora lehibe samihafa. Vinaingitra fotsy, ohatra, vita amin'ny alikaola, fa vinaingitra balsama kosa vita amin'ny voaloboka. Ny vinaingitra malt ankafizin'ny anglisy dia novokarina avy tamin'ny voam-bary. Noho ny asidra avoakany, raha tehirizina amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maizina ary mihidy mafy, ny vinaingitra paoma dia manana fiainana tsy manam-petra koa.
Inona no ataon'ny vinaingitra paoma amin'ny vatanao?
Vinaingitra cider Apple sy ny akora ilaina ao aminy — asidra acetic, dia mety hisy fiatraikany mahasoa amin'ny vatanao, ao anatin'izany ny famonoana bakteria, fanamafisana ny siramamy ao anaty, ary fampiroboroboana ny fihenan'ny lanja. Ny asidra acetic dia nampiasaina ara-tantara ho famonoana otrikaretina. Io dia mety ho mamono bakteria izay mitarika mony na otrikaretina. Izy io dia miasa hanatsarana ny fahatsapana insuline, izay afaka sorohana ny fikitry ny siramamy ao anaty rehefa avy nisakafo. Ny fanadihadiana natao tamin'ny olombelona dia nampiseho fa ny ACV dia manemotra ny famoahana ny vavonin-tsavony, ary manakana ny fitomboan'ny siramamy ao anaty, rehefa omena sakafo starchy. Izany koa dia efa nianatra tamin'ny voalavo , miaraka amin'ny valiny mampiseho fanatsarana ny asan'ny sela beta-pankreas (mety miteraka fitomboan'ny insuline endogenous). Na izany na tsy izany, ny vokany dia tena mahasoa ny olona voan'ny diabeta. Izy io dia afaka mampitombo ny fahatsapana ny fahafenoana, izay mety hidika hoe mihinana kely ianao ary mampihena lanja . Ny fandinihana biby sasany dia mampiseho fa ny vinaingitra dia afaka mampihena ny tosidra, saingy tsy ampy ny fikarohana mba hanehoana vokatra mahasoa amin'ny olombelona. Ary na dia angano mahazatra aza fa ny vinaingitra paoma dia afaka mampihena ny fitomboan'ny homamiadana, tsy mbola misy porofo ampy hampiasana azy io ho fitsaboana.
Inona no atao hoe sakafo ACV?
Ka ahoana no ampidirana ny vinaingitra paoma amin'ny sakafo mampihena lanja? Voalohany, zava-dehibe ny mahatakatra fa ny sakafon'ny vinaingitra paoma dia tsy drafitra fisakafoanana mafy sy haingana, toy ny fanandramana keto (sakafo matavy be) na fanapahana ronono. Fa kosa, mihodina manodidina ny fihinana vinaingitra paoma sotro iray sotro, na mialoha na miaraka amin'ny sakafo, mba hampiroborobo ny fihenan-danja.
Ahoana ny fahombiazan'ny vinaingitra paoma?
Ho an'ny vokatra mora vidy sy be mpampiasa toy izany, dia toa misy tombontsoa ara-pahasalamana vitsivitsy amin'ny vinaingitra paoma, izay ny ankamaroany dia avy amin'ny asidra acetic hita ao amin'ny ACV - ny asidra acetic koa dia ao amin'ny vinaingitra, pickles ary sakafo misy vinaingitra , toy ny sauerkraut. Raha mitady hihena ny lanjan'ny vatana ianao dia efa nisy ny fikarohana nampanantenaina, saingy lavitra ny farany.
Iray fianarana mandritra ny valo herinandro natao tamin'ny totozy diabeta dia nahita fa ireo izay nomena sakafo misy asidra acetic dia ambany kokoa ny siramamy ao amin'ny rà noho ny totozy izay nihinana sakafo mahazatra. Fandinihana biby nahita fa ny voalavo diabeta izay nihinana sakafo misy vinaingitra paoma dia nahita fihatsaran'ny marika ara-pahasalamana ho an'ny diabeta karazana-2.
Ny olombelona dia nahazo tombony tamin'ny asidra acetic sy ACV koa. Japoney misy jamba indroa, Fitsarana 12 herinandro nahita fa, tamin'ny faran'ny fandalinana, ny lohahevitra izay nisotro zava-pisotro misy vinaingitra dia ambany kokoa ny lanjany, ny fatran'ny vatan'ny vatana, ny haben'ny andilany ary ny tavy visceral noho ireo lohahevitra ao amin'ny vondrona placebo izay tsy nanana vinaingitra.
Rehefa entina amin'ny sakafo sy gliosida sarotra, ACV koa mihena aorian'ny fihinanana siram-dra haavon'ny olon-dehibe voan'ny diabeta. ny Fianarana 2003 manondro ny vinaingitra manatsara ny fahatsapana insuline aorian'ny sakafo mavesatra karbaona. Ny fanadihadiana iray hafa dia manondro fa ny asidra acetic dia mety mifehy ny fahazotoan-komana . Ary mbola misy iray hafa fianarana kely olon-dehibe 12 no nahita fa rehefa nanana vinaingitra niaraka tamin'ny mofony ireo mpandray anjara, dia nilaza fa feno kokoa izy ireo ary ambany ny siramamy ao amin'ny rà noho ny tamin'ny fihinanany ny mofo irery.
Ka raha manandrana mamoy tavy amin'ny vatana ianao dia ny vinaingitra paoma cider no valiny? Tsy dia haingana. Na dia mety manana tombony ara-pahasalamana ho an'ny tsy manana diabeta (na ny olombelona na ny voalavo) ny ACV, mbola tsy misy porofo mivaingana izay mampiseho hoe inona ireo tombony ireo. Ary na dia mety manampy an'ireo voan'ny diabeta aza ny vinaingitra paoma dia tokony hoheverina ho fanampin'ny diabeta na prediabetes drafitra fitantanana fa tsy fanasitranana.
Iray fandalinana mahaliana avy any Angletera dia nanontany tena raha ny vokatry ny vinaingitra paoma namboarina tamin'ny fiankinan-doha sy ny voky dia tsy vokatry ny fahasalamana vinaingitra mihintsy, fa ny tsiro mahafinaritra. Ny valiny dia nanondro fa na dia manatsara ny fahafaham-po aza ny fihinanana vinaingitra, ny vokatr'izany dia vokatry ny tsy fandeferana aorian'ny fanentanana mampihetsi-po. Vakio: Tsy hoe mahatsapa ho feno kokoa ny olona rehefa avy misotro vinaingitra, fa tsy te hihinana na inona na inona satria sosotra avy eo. Tsy mampanantena loatra.
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fananana vinaingitra paoma be dia be dia tsy voatery ho zavatra ratsy, saingy tsy azo inoana fa hitondra vokatsoa amin'ny fihenan'ny lanja izany, hoy i Rachel Trippett, MD, dokotera iray ao amin'ny US Public Health Service Indiana Hopitaly any New Mexico. . Aleo ianao mifantoka amin'ny fihinanana sakafo bebe kokoa toy ny voankazo, legioma ary hena misy kalitao ary mankany amin'ny gym fa tsy misotro vinaingitra paoma.
Azo antoka ve ny vinaingitra paoma?
Na izany aza, raha ao amin'ny ekipa ACV ianao ary te-hanandrana azy, dia misy vokany hafa mety ho tianao hodinihina…
ACV dia afaka mampihena ny enamel nify. Ny asidra amin'ny vinaingitra dia mety handrava ny enamel nify. Ny nify malemy dia mety hitarika olana amin'ny nify, anisan'izany ny fahasimban'ny nify. Raha hanananao vinaingitra paoma no mpiorina lehibe indrindra fa tsy, lazao, amin'ny akanjo salady dia tsara kokoa ny manalefaka azy amin'ny rano kely.
ACV dia mety hikorontana amin'ny haavon'ny potasioma. Amin'ny olona sasany, ny fihinanana ACV tsy tapaka dia nampidina ny tahan'ny potasioma. Raha efa eo am-panafody afaka mampihena ny potasioma ianao, toy ny fanafody tsindry sasany, dia te hitandrina ianao.
ACV dia afaka manova ny tahan'ny insuline. Na dia mety mahasoa ny diabeta aza ny ACV, dia mety hanova ny tahan'ny insuline ihany koa izy io. Tokony hitandrina manokana amin'ny vinaingitra ianao ary hiresaka amin'ny mpitsabo anao alohan'ny hampitomboana ny fihinana vinaingitra paoma misy anao.
Fanafody mampihena lanja hanontanianao momba ny dokoteranao
Loharano tsara kokoa ho an'ny toro-hevitra momba ny fihenan-danja: mpanome fahasalamana ara-pahasalamana, mpahay sakafo, na mpitaiza sakafo. Izy ireo dia afaka manampy amin'ny famolavolana programa iray ahafahanao mampihena ny lanjanao soa aman-tsara, mandritra ny fandinihanao ny fomba fiainanao, ny fahazarana isan'andro, ny fanafody rehetra, ary maro hafa.
Ankoatr'izay, misy fanafody presktera maromaro izay nankatoavina avy amin'ny U.S. Food and Drug Administration (FDA) noho ny fihenan-danja. Matetika, ireo dia atokana ho an'ny olona manana olana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny lanjany loatra na matavy loatra. Ireo nankatoavina hampiasaina maharitra dia:
Ery (misy amin'ny doka ambany kokoa tsy misy fametahana)
Ny fanafody sasany dia mampihena ny fahazotoan-komana ary neken'ny FDA hampiasaina vetivety — hatramin'ny 12 herinandro — ihany. Na dia mety manoritra ny iray amin'ireto mandritra ny 12 herinandro mahery aza ny mpitsabo anao dia tsy fantatra ny voka-dratsy vokatr'io fotoana io. Ireto fanafody ireto dia misy:
Ny mpitsabo anao dia afaka manombatombana raha ny tantaram-pahasalamanao no mahatonga anao ho kandida tsara amin'ny iray amin'ireto zava-mahadomelina ireto sy ny fomba fiasa tsara indrindra.
Ny aretin'ny toetran'ny olona mifanohitra amin'ny aretin'ny bipolar: inona no maha samy hafa azy? Afaka samy manana ve ianareo?
Ketosis vs. ketoacidosis: Ampitahao ny antony, soritr'aretina, fitsaboana ary maro hafa
ace inhibitors vs beta blockers vs calcium channel blockers
haavon'ny siramamy ao anatin'ny adiny iray aorian'ny fihinanana
ny fomba fanariana ny holatra fitsaboana an-trano
fotoana tsara indrindra hakana singulair ho an'ny asma
afaka mandray advil sy tylenol miaraka amin'izay ve ianao
claritin tsy miasa afaka maka zavatra hafa ve aho